Maxkamadda ICC oo baareysa "dembiyada dagaal" ee ka dhacay Falastiin - BBC News Somali
Maxkamadda ICC oo baareysa "dembiyada dagaal" ee ka dhacay Falastiin
Dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC, Fatou Bensouda, ayaa sheegtay in ay dooneyso in ay billowdo baaritaanno lagu eegayo suurtagalnimda in dambiyo dagaal ay ka dheceen dhulka Falastiyiniinta.
Fatou Bensouda ayaa sheegtay in "dambiyo dagaal" laga geysanayo amaba ay ka dhaceen dhulka ay Israa'iil xoogga ku haysato ee ku yaal daanta galbeed, bariga Quddus iyo marinka Qasa, waxa ayna codsatay in maxkamaddaasi ay go'aan ka soo saarto in sharci ahaan ay xaq u leedahay in ay dacwaddaasi qaado iyo in kale.
Maxkamaddaasi ICC ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ayaa eegeysay dacwad sanadkii 2015 ay soo gudbiyeen dad reer Falastiin ah.
Israa'iil ayaa tallaabadaasi maxkamadda ICC ku tilmaantay "mid aan sal iyo raad lahayn".
Dagaalka Israel iyo Gaza oo dib u qarxay ka dib dilka hoggaamiye sare
Warbixin qoraal ah oo uu soo saaray ra'iisalwasaaraha Israa'iil, Benjamin Netanyahu, ayaa waxa uu ku sheegay in maxkamaddaasi aysan wax dacwad ah ku soo oogi karin Israa'iil maadaama buu yiri Israa'iil aysan ka mid ahayn waddamadii saxiixay heshiiskii Rome ee lagu aasaasay maxkamaddaasi. Waxa kale oo uu sheegay in maxkamaddaasi ay dooneyso in ay meel uga dhacdo sharciyadda jiritaan Israa'iil.
Israa'iil ayaa dagaalkii bariga dhexe ee sanadkii 1967 ku qabsatay daabta galbeed, Qasa iyo bariga Quddus.
Bensouda ayaa sheegtay in baaritaannada hordhaca ah ay muujinayaan caddeymo ku filan oo horseedi karaya in dacwaddaasi lagu furo Israa'iil, sidaa awgeedna ay jiraan sababo dhab ah oo baaritaankaasi lagu billaabi karo.
"Ma jiraan sababo loo rumeysan karayo in baaritaankaasi uusan horseedi doonin in la helo caddaalad," ayay tiri, waxa ayna intaasi ku dartay in garsooreyaasha maxkamadda ay ka codsatay in ay go'aan ka soo saaraan in dacwaddaasi ay qaadi karaan iyo in kale.
Ilaa iyo hadda ma kala cadda marka garsooreyaashu ay go'aankaasi soo saari doonaan balse Bensouda ayaa sheegtay in garsooreyaashu ay ka codsatay "in ay soo saaraan go'ankaasi" "si bey tiri xafiiskeedu uu u qaado tallaabada xigta".
Bensouda ma aysan caddayn kuwa ay yihiin dadka geystay dambiyada dagaal ee la sheegay in ay ka dheceen dhulkaasi Falastiyiniinta balse sida uu sheegaya weriyaha BBC-da uga soo warramo bariga dhexe, waxaa suurtagal ah in shakhsiyaad ka tirsan Israa'iil iyo Falastiin lagu soo oogo dacwaddaasi.
Waxaa la ogyahay in maxkamaddani ay baritaankeedii hore diradda ku saartay arrimo ay ka mid yihiin dhismeyaasha Israa'iil ay ka waddo dhulka Falastiyiniinta iyo hawlgaallada milatari ee Qasa.
Maxkamadaasi ICC ayaa baaritaan ku waday dambiyo dagaal oo la sheegay in ay ka dhaceen dhulka Falastiyiniinta tan iyo bishii Juun ee sanadkii 2014, muddadaa oo ku beegan hal bil ka hor inta uusan Qasa dagaal ku dhex marin mintidiint.
Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 2,251 qof oo Falasdhiyiniin ah oo ay ku jiraan 1,462 qof oo rayid ah iyo 67 askari. Dhanka Israa'iil waxaa dagaalkaasi uga dhintay lix qof oo rayid ah.
Ra'iisalwasaare Netanyahu ayaa go'aankaasi maxkamadda ku tilmaamay "mid laga caroodo", wuxuuna yiri: "Maxkamadda ICC waxay sharciyan soo oogi kartaa dacwad uu soo gudbiyay dal madax-bannaan. Balse wali lama arag dal la yirahdo Falastiin oo madax-bannaan."
Mar sii horreysay ayaa xeer ilaaliyaha Israa'iil waxa uu sheegay in maxkamaddaasi aysan qaadi karin dacwad ku saabsan daanta galbeed iyo Gaza. Israa'iil ayaa sidoo kale bariga Quddus u aragta dhul ka madax-bannaan sharciga iyo awoodda maxkamaddaasi.
Falasdhiiyiniintu ayaa ku doodaya in bariga Quddus ay tahay caasimadda jamhuuriyadda Falasdhiin ee mustaqbalka.
Warbixin qoraal ah oo laga soo saaray xafisska maamulka Falasdhiyiniinta ayaa lagu sheegay in: "Falasdhiin ay soo dhaweynayso tallaabadan oo ah mid aad loola soo daahay ka dib shan sano oo ay socdeen baaritaanno hor dhac ah."
Hay'ad ka shaqeysa arrimaha xaquuqul insaanka Israa'iil oo lagu magacaabo B'Tselem, ayaa go'aanka maxkamadda sooo dhaweysay waxa ayna sheegtay in: "Dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ee dhanka sharciga ee lagu baabi'inayo dambiyada ay geysatay, ma ahan in la ogolaado in looga hortago dedaallada caalamiga ee sharciga ah ee ay tahay in Israa'iil lagula xisaabtamo."
Waxaa jira ilaa 140 goobood oo ay Israa'iil deegaanno ka dhisatay, kuwaa oo ku yaal daanta galbeed iyo bariga Quddus, kuwaasi oo beesha caalamka inteeda badan ay u aragto kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ahi. Israa'iil ayaa arrintan ku gacan seyrtay, waxaana bishii hore Mareykanku uu ka noqday mowqifkiisii hore ee deegaannadaasi ka dhigayay sharcidarro, wuxuuna cadeeyay in aan dib dambe deegaannadaasi aan loo aqoonsan doonin kuwo sharci darro ah.